Xoghayihii hore ee wasaaradda cayaaraha oo maxkamad la soo taagayo – The Voice of Northeastern Kenya
Waxaa maanta maxkamada ka soo hormuuqanaya 3 sarkaal oo uu ka mid yahay xoghayihii hore ee wasaaradda cayaaraha, dhaqanka iyo farshaxanka Richard Ekai.
Mas’uuliyiintan ayaa lala xiriiriyay fadeexad laga soo tabiyay wasaaradaasi oo lagu lunsaday 55 milyan xiligii cayaarihii Olimbikada ee sannadkii 2016-kii.
Waxaa sido kale la maxkamadeynaya madaxii wafdigii ka socday Kenya ee tagay magaalada Rio Stephen Soi, xoghayaha guud ee guddiga qaran ee Olimbikada ee NOCK Francis Kinyili iyo Kipchoge Keino oo horay u soo noqday guddoomiyaha guddigga cayaartaasi.
Wasiirkii hore ee wasaaradda cayaaraha dalka ahna safiirka Kenya ee wadanka Austria Xassan Wario ayaa isna lagu amray inuu wadanka dib ugu soo laabto si wax looga weydiiyo fadeexaddaasi.
Bayaan uu soo saaray agaasimaha dacwad oogidda ayaa waxaa sido kale lagu xusay magacyada agaasimihii hore ee wasaaradda cayaaraha dhaqanka iyo farshaxanka u qaabilsanaa dhanka maamulka Harun Komen ,Francis Kanyili, xoghayihii guud ee guddiga NOCK iyo Patrick Kimathi oo ahaa sarkaal ka tirsanaa waaxda maaliyadda ee wasaaradda.
Nuudiin Xaaji ayaa rumeysan in mas’uuliyiintan ay ku lug lahayeen lunsashada 22.4 milyan oo shilin.
← DHAGEYSO Madaxweynaha Soomaaliya oo kulamo la qaatay saraakiisha ciidamada ee magaalada Marka.
Somalia executes man on first anniversary of devastating bombing →